(ကင်မရွန်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 6°N 12°E﻿ / ﻿6°N 12°E﻿ / 6; 12
République du Cameroun (ပြင်သစ်) Renndaandi Kamerun (ဖူလာ)
"Paix – Travail – Patrie" (ပြင်သစ်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: <
Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres (ပြင်သစ်)
(အင်္ဂလိပ်: "O Cameroon, Cradle of our Forefathers")
ယောင်အွန်ဒေးမြို့ (city proper) ဒူအာလာမြို့ (metropolitan area)
၃၁% Cameroon Highlanders
၁၉% Equatorial Bantu
၈% Northwestern Bantu
၇% Eastern Nigritic
၇% other African
ပြည်ထောင်စု တစ်ပါတီ သမ္မတတစ်ပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံသမ္မတစနစ်
ပြင်သစ်နှင့် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းမှ လွတ်လပ်ရေးရ
၁၉၆၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်
၁၉၆၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်
၄၇၅,၄၄၂ km2 (၁၈၃,၅၆၉ sq mi) (အဆင့်: ၅၃)
၂၆,၅၄၅,၈၆၄  (အဆင့် - ၅၁)
• ၂၀၀၅ သန်းခေါင်စာရင်း
၃၉.၇/km2 (၁၀၂.၈/sq mi) (အဆင့် - ၁၆၇)
$၁၀၁.၉၅၀ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၉၄)
$၃,၇၄၅ (အဆင့် - ၁၅၁)
$၄၄.၈၉၃ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၈၉)
$၁,၆၄၉ (အဆင့် - ၁၅၀)
အလယ် · ၁၅၃
ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် (XAF)
ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံးအမည်မှာ ကင်မရွန်းသမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အလယ်အာဖရိကတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ချဒ်နိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ၊ ဂါဘွန်နိုင်ငံနှင့် ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက် ရှိသည်။ ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းသည် အတွင်းဟိုက်ပင်လယ်ကွေ့ တစ်ခု ဖြစ်သော ဘွန်နီပင်လယ်အော်ပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ၎င်းမှာ ဂီနီပင်လယ်ကွေ့နှင့် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတို့၏ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတွင်းတွင် ပထဝီဝင်အနေအထားပေါင်းစုံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ ရောနှောလျက် ရှိနေသောကြောင့် ကင်မရွန်းနိုင်ငံကို အာဖရိကတိုက်ငယ်ကလေး ဟုလည်း တင်စားခေါ်ဆိုကြသည်။ သဘာဝ ပထဝီဝင် အနေဖြင့် အပန်းဖြေကမ်းခြေများ၊ သဲကန္တာရများ၊ တောင်တန်းများ၊ မိုးသစ်တောများ၊ ဆာဗားနားမြက်ခင်းပြင် များအစုံရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ်မှာ နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ကင်မရွန်းတောင်ထိပ် ဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံးမြို့တော်များမှာ ဒူဝါလာ (Douala)၊ ယောင်အွန်ဒေး (Yaoundé) နှင့် ဂရူဝါ (Garoua) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကင်မရွန်းတွင် ဘာသာစကားမျိုးကွဲပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ရှိသည်။ ကင်မရွန်းနိုင်ငံသည် သူတို့၏ တစ်မူထူးခြားသည့် makossa နှင့် bikutsi ဂီတအနုပညာများကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကင်မရွန်းဘောလုံးအသင်းကြောင့်လည်းကောင်း ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် လူသိများထင်ရှားသည်။ နိုင်ငံ၏ တရားဝင် ရုံးသုံးဘာသာစကား အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ် နှင့် ပြင်သစ်ဘာသာစကားများကို သတ်မှတ်ထားသည်။
အစောပိုင်း လူနေမှုများမှာ ချဒ်ရေကန် ကြီးဝန်းကျင်ရှိ ဆောင် ယဉ်ကျေးမှု လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အရှေ့တောင်ပိုင်း မိုးသစ်တောအတွင်းရှိ ဘာကာ မုဆိုးရွာများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုဒေသ ကမ်းရိုးတန်းသို့ ၁၅ ရာစုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီလူမျိုး စူးစမ်းရှာဖွေသူတို့ ရောက်ရှိလာကြပြီး ရိုင်ယိုဒေါ့စ်ကင်မရိုးစ် (Rio dos Camarões) ဟု အမည်ပေးခဲ့ကြသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ပုစွန်မြစ် ဟု ဖြစ်သည်။ ထိုအမည်မှတဆင့် ယခုခေါ်တွင်နေသော ကင်မရွန်းအမည် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၁၉ ရာစုနှစ်က နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ဖူလာနီ စစ်သားများက အာဒါမဝါစော်ဘွားနိုင်ငံ ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံအနောက်ဘက်နှင့် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် အမျိုးမျိုးသော လူမျိုးစု နိုင်ငံငယ်များ ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းနိုင်ငံငယ်များကို chiefdoms သို့မဟုတ် fondoms များဟုခေါ်ဆိုသည်။ ၁၈၈၄တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။
အခြားသော အာဖရိကနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းစာလျှင် ကင်မရွန်းသည် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အတော်ပင် တည်ငြိမ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် မီးရထားလမ်းများ၊ ရေနံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများ အများအပြားထွန်းကားလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ကင်မရွန်းနိုင်ငံသားအများစုမှာ ဆင်းရဲလျှက်ပင်ရှိနေသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လယ်သမား အများစုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အာဏာသည် သမ္မတ ပေါလ်ဘီယာ နှင့် ကင်မရွန်းပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်လှုပ်ရှားမှုပါတီ ၏ လက်ထဲတွင် ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ခိုင်မြဲလျက် ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသော ကင်မရွန်းတောင်ပိုင်းမှ နိုင်ငံရေးသမား များသည် ဗဟိုအစိုးရမှ ချုပ်ကိုင်မှုများကို လျှော့ချပေးရန် မှသည် တောင်ပိုင်းကို သီးခြားခွဲထွက်ရန် တောင်းဆိုသည်အထိ ပဋိပက္ခသဘောများ တိုးပွားလာလျက် ရှိသည်။
ပြင်သစ်တို့က တော်လှန်ရေးစိတ် အပြင်းဆုံး နိုင်ငံရေး ပါတီ ဖြစ်သော ကင်မရွန်းပြည်သူ့သမ္မဂ္ဂ ပါတီကို ၁၉၅၅ ဇူလိုင်လ ၁၃ တွင် တရားမဝင် ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ကာလရှည် ပြောက်ကျားစစ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပါတီခေါင်းဆောင် ဖြစ်သော ရူဘင် အမ် နျိုဘီ မှာ လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။ ဗြိတိသျှ ကင်မရွန်း အတွက် မေးခွန်းမှာမူ ပြင်သစ် ကင်မရွန်းနှင့် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းမည်လော သို့မဟုတ် နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် ပေါင်းစပ်မည်လော ဟူသည့် မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလတွင် ချီဘော့ခ် ကျောင်းသူများ ပြန်ပေးဆွဲမှု အပြီးနောက်တွင် ကင်မရွန်း သမ္မတ ပေါလ် ဘီယာ နှင့် ချဒ်မှ အီဒရစ် ဒက်ဘီ တို့မှ ဘိုကို ဟာရမ် သူပုန်တို့အား တိုက်ခိုက်ရန် ကြေညာခဲ့ပြီး နိုင်ဂျီးရီးယား နယ်စပ်တွင် တပ်များ ချထားခဲ့ကြသည်။
ကင်မရွန်း သမ္မတသည် အရွေးချယ်ခံ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ပေါ်လစီများ ဖန်တီးရန်၊ အစိုးရ အေဂျင်စီများကို အုပ်ချုပ်ရန်၊ စစ်တပ်ကို အမိန့်ပေးရန်၊ စာချုပ် စာတမ်းများကို ညှိနှိုင်း အတည်ပြုရန် နှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာရန် လွှတ်တော်နှင့် တိုင်ပင် လုပ်ဆောင်ရသည်။  သမ္မတသည် အစိုးရ အရာရှိများကို အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးရပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ( အစိုးရ၏ တရားဝင် ဦးစီးပြုသူ) မှ စ၍ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ နှင့် တိုင်းဒေသ အရာရှိ များ အထိ ပါဝင်သည်။ သမ္မတသည် ခုနစ်နှစ် တစ်ကြိမ် မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြောက်ရသည်။
ကင်မရွန်း အနောက်ပိုင်း ဘာနာရှိ ချိဖ်၏ ရုပ်တု
၂၀၁၂ ခုနှစ် ခန့်မှန်းချက်အရ မွေးစမှ ပျမ်းမျှသက်တမ်းကို ၅၄.၇၁ နှစ် သတ်မှတ်သဖြင့် ကမ္ဘာ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်း အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်သည်။ ပုံမှန် တွေ့ရလေ့ ရှိသော ရောဂါများမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ၊ ဖီလာရီယာသန်စွဲနာ၊ လီရှမာနီယာပိုးစွဲနာ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ရောဂါ၊ ရှစ်စတိုဆိုမာသန်စွဲနာ ၊ အာဖရိကန် ထရစ်ပနိုစိုမီရေးစစ် တို့ ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၄၉ နှစ်အတွင်း အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် တွေ့ရှိမှုနှုန်းမှာ ၅.၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သော်လည်း ထိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုရေးအရ ရှက်ကြောက်၍ ထုတ်မပြောကြသောကြောင့် နည်းပါးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကင်မရွန်းနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးလေ့ ရှိသော ရိုးရာ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်သည့် အပျိုဖော်ဝင်စ အမျိုးသမီးတို့၏ ရင်သားကို မာကျောသော အရာဝတ္ထု သို့မဟုတ် အပူပေးထားသော အရာဝတ္ထုဖြင့် ပျောက်ပျက်သေးငယ်အောင် လုပ်ခြင်းသည်လည်း အမျိုးသမီးတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသည်။  အမျိုးသမီးတို့၏ မအင်္ဂါစေ့ကို ဖြတ်တောက်သည့် အလေ့အထမှာလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရှိသော်လည်း လူဦးရေ တစိတ်တပိုင်းတွင် ကျင့်သုံးလျက် ရှိသည်ဟု ၂၀၁၃ ခုနှစ် ယူနီဆက်ဖ်၏ အစီရင်ခံစာ အရ သိရပြီး ကင်မရွန်း အမျိုးသမီးထု၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မအင်္ဂါစေ့ ဖြတ်တောက်ထားခြင်း ခံရသည်။ ရိုးရာ တိုင်းရင်းဆေးမှာလည်း အနောက်တိုင်းဆေးပညာအပြင် အခြား ရွေးချယ်စရာ တစ်ခု အဖြစ် လူကြိုက်များဆဲပင် ဖြစ်သည်။
ကင်မရွန်းတောင်တန်း ဟုခေါ်သည့် ပုံသဏ္ဍန်မှန်သော တောင်ကုန်းများ၊ တောင်တန်းများ နှင့် ကုန်းမြေမြင့်များသည် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ကင်မရွန်းတောင်မှ မြောက်ဘက်ပိုင်း ကင်မရွန်းနယ်စပ် လတ္တီကျု ၁၃ ဒီဂရီ ၅ မိနစ် ချဒ်ရေကန် အထိ ရှည်လျားစွာ တည်ရှိပြီး ကင်မရွန်းတောင်မှာ ၁၃,၄၃၅ ပေ( ၄,၀၉၅ ပေ) ဖြင့် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသတွင် မိုးရွာကျမှု များသော်လည်း ပြင်းထန်သော ရာသီဥတု ရှိကာ အထူးသဖြင့် အနောက်ဘက် ကုန်းမြေမြင့် တွင် ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသရှိ မြေကြီးများအား ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရန် အကောင်းဆုံးသော မြေများ ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် မီးတောင်ဒေသဖြစ်သော ကင်မရွန်းတောင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်သည်။ မီးတောင်ကြောင့် မီးတောင်ထိပ်ဝရေကန်များ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင် ထိုသို့သော ရေကန်တစ်ခု ဖြစ်သည့် နျိုရေကန်မှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ် ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လွှတ်သဖြင့် လူ ၁,၇၀၀ မှ ၂,၀၀၀ ကြား သေဆုံး ခဲ့ရသည်။ ထိုဒေသအား ကမ္ဘာ့သားရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ကင်မရွန်းကုန်းမြင့်သစ်တော ဇီဝ ရပ်ဝန်းဒေသအဖြစ် သတ်မှတ် ဖော်ပြထားသည်။
တောင်ဘက် ကုန်းမြေမြင့်မှာ မညီညာ၍ မြက်ခင်းထူထပ်သော အဒါမဝါ ကုန်းမြေမြင့် ဆီသို့ မြင့်တက်သွားသည်။ ထို မြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည် အနောက်ဘက် တောင်ကုန်းဒေသသို့ ဆန့်တန်းသွားပြီး နိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းကြား အရံအတား အဖြစ်ကာဆီးလျက် ရှိသည်။ ၎င်း၏ ပျမ်းမျှ အမြင့်ပေမှာ ၃,၆၀၉ပေ (၁,၁၀၀ မီတာ) ဖြစ်ပြီး။ ပျမ်းမျှ အပူချိန်မှာ ၂၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် မှ ၂၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိ ဖြစ်သည်။ ဧပြီလနှင့် အောက်တိုဘာလကြား မိုးအများဆုံး ရွာကျပြီး မိုးရေချိန် အမြင့်ဆုံးမှာ ဇူလိုင်လ နှင့် ဩဂုတ်လ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ မြောက်ပိုင်းမြေနိမ့်ဒေသမှ အဒါမဝါ၏ အစွန်းမှ ချဒ်ရေကန်အထိ သွယ်တန်းလျက် ရှိပြီး ပျမ်းမျှ အမြင့်ပေမှာ ၉၈၄ ပေ မှ ၁,၁၄၈ပေ (၃၀၀ မီတာ မှ ၃၅၀ မီတာ) အထိ ဖြစ်သည်။. ၎င်းတွင် တွေ့ရသော သဘာဝပေါက်ပင်များမှာ ဆာဗားနား ချုံထနောင်းတော နှင့် မြက်ခင်းများ ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသမှာ မိုးခေါင်သော ဒေသဖြစ်ပြီး မိုးကွက်ကျား ရွာကျကာ ပျမ်းမျှ အပူချိန် မြင့်မားသည်။
ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များမှာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အထူး သင့်လျော်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လူဦးရေ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ စိုက်ပျိုးရေး ပြုလုပ်ကြပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်တွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမှာ ၁၉.၈ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ပါဝင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း အများစုကို ဒေသခံ လယ်သမားများက ဝမ်းစာဖူလုံရုံမျှ အတွက် ရိုးရှင်းသော ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ သူတို့သည် ပိုလျှံသော ထွက်ကုန်များကို ရောင်းချကြပြီး အချို့မှာ စီးပွားရေးအတွက် လယ်ကွင်းသီးသန့်များကို ထိန်းသိမ်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ မြို့ပြများက ၎င်းတို့၏ အစားအစာအတွက် လယ်သမားတို့၏ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို အားကိုး အားထား ပြုရသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသရှိ မြေသားများနှင့် ရာသီဥတုတို့က ငှက်ပျော၊ ကိုကိုး၊ ဆီအုန်း၊ ရာဘာ နှင့် လက်ဖက်တို့ကို စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးသည်။ ကုန်းတွင်းပိုင်းရှိ တောင်ပိုင်း ကင်မရွန်းကုန်းမြင့်ဒေသတွင် ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော ကော်ဖီ၊ သကြား နှင့် ဆေးရွက်ကြီးတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ အနောက်ဘက် ကုန်းမြင့်ဒေသရှိ အဓိကဝင်ငွေရ သီးနှံမှာ ကော်ဖီ ဖြစ်ပြီး မြောက်ပိုင်းတွင် ဝါ၊ မြေပဲ နှင့် စပါးတို့ကို သဘာဝအလျောက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ပြည်ပထွက်ကုန်အတွက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို အားထားသောကြောင့် ကင်မရွန်းအနေနှင့် ၎င်းတို့၏ ဈေးနှုန်းများကို ပြောင်းလဲရန် အတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားသည်။
တိရစ္ဆာန်များကို နိုင်ငံအနှံ့တွင် မွေးမြူကြသည်။ ငါးဖမ်းခြင်း မှ လူပေါင်း ၅,၀၀၀ ကျော်ကို အလုပ်ပေးထားပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတွင် ပင်လယ်စာ ၁၀၀,၀၀၀ တန် ကျော်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ယခင်က ကျေးလက်နေ ကင်မရွန်းပြည်သူမျာအတွက် ပင်မ အစားအစာ ဖြစ်ခဲ့သော တောကောင်သားများမှာ ယခု အခါတွင် နိုင်ငံရှိ မြို့ပြကြီးများအတွက် အထူးအစားအစာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တောင်ကောင်သားများကို စီးပွားဖြစ် ရောင်းဝယ်ခြင်းသည် ကင်မရွန်းရှိ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှု အနေဖြင့် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းကို ကျော်တက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စက်ရုံလုပ်ငန်းများမှာ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏ ၂၉.၇ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိသည်။ ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏ စက်ရုံလုပ်ငန်းများ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဒူဝါလာမြို့ နှင့် ဘိုနာဘယ်ရီမြို့ တို့တွင် တည်ရှိကြသည်။ ကင်မရွန်းနိုင်ငံတွင် သတ္တုတွင်းထွက်များ အတော်အတန် ရှိသော်လည်း ထိုတွင်းထွက်များကို ကျယ်ပြန့်စွာ တူးဖော်ခြင်း မပြုကြပေ။  ရေနံ ရှာဖွေမှုမှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ စ၍ ကျဆင်းလာခဲ့သော်လည်း အတော်အသင့် အရေးပါသော ကဏ္ဍ တစ်ခု အဖြစ် ကျန်ရှိနေပြီး ရေနံ ဈေးကျဆင်းပါက နိုင်ငံ့ စီးပွားရေးကို အပြင်းအထန် ရိုက်ခတ်လေ့ ရှိသည်။ ရေမော်များ နှင့် ရေတံခွန်များက တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ မြစ်များတွင် အရံအတား များ အဖြစစ် ရှိနေကြသော်လည်း ထိုနေရာများက ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေပြီး ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင် လိုအပ်မှုကို ဖြည့်ဆီးပေးလျက် ရှိသည်။ ဆာနာဂါ မြစ်မှ အီဒီယာရှိ အကြီးဆုံသော ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံကို စွမ်းအင် ပေးလျက် ရှိသည်။ ကျန်ရှိသော ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင် လိုအပ်မှုများကို ဆီဖြင့်မောင်းနှင်ရသော ဓာတ်အားပေးစက်များမှ ဖြည့်တင်းပေးလျက် ရှိသည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံ၏ ဒေသ အတော်များများတွင် အားထားရသော လျှပ်စစ်မီး မရှိသေးပေ။
ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ အများအားဖြင့် ခက်ခဲသည်။ အဓိက မြို့ကြီးများကို ဆက်သွယ်ပေးထားသော အခြားလမ်းများနှင့် ယှဉ်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခကြေးငွေကောက်ခံသည့် လမ်းများ (အားလုံးမှာ ကားတစ်စင်းသာ မောင်းနိုင်သည်။)သာ ရှိပြီး ထိုလမ်းများမှာလည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိသလောက် ဖြစ်ပြီး ၁၀% မျှသာ ကတ္တရာ ခင်းထားသဖြင့် ဆိုးရွားသော ရာသီဥတုရှိလျှင် သွားလာ မရပေ။ လမ်းတွင်ရှိသော စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှာလည်း ရဲများ နှင့် ဂျန်ဒါမီ ရဲများ အတွက် ခရီးသွားများ ထံမှ ငွေညှစ်ရုံမှ အပ အခြားကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက် မရှိပေ။ လမ်းဓားပြတိုက်ခြင်းကလည်း အရှေ့ဘက် နှင့် အနောက်ဘက် နယ်စပ်များရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စ၍ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ မတည်မငြိမ် ဖြစ်မှုကြောင့် ပြဿနာမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။  ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများမှ ဆောင်ရွက်သော မြို့အချင်းချင်း ဆက်သွယ်သည့် အဝေးပြေး ကားလိုင်းများမှ အဓိကမြို့ကြီးများကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ အဝေးပြေးကားမှာ လူသုံးအများဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ်ရေးလ် ဟုခေါ်သော ကင်မရွန်း ရထားမှာ ဒုတိယမြောက် လူသုံးအများဆုံး ဖြစ်သည်။ ရထားပို့ဆောင်ရေးမှာ အနောက်ဘက်ပိုင်းရှိ ကွန်းဘာ မှ အရှေ့ဘက်ပိုင်းရှိ ဘဲလဘူမြို့သို့လည်းကောင်း၊ မြောက်ဘက်ရှိ ညောင်ဒရေသို့လည်းကောင်း အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်များမှာ ဒူဝါလာမြို့ နှင့် ယောင်အွန်ဒေးမြို့များတွင် တည်ရှိကြပြီး တတိယမြောက်လေဆိပ်ဖြစ်သော မာအူယာ လေဆိပ်မှာ တည်ဆောက်ဆဲ ဖြစ်သည်။ ဒူဝါလာမြို့မှာ နိုင်ငံ၏ အဓိက ဆိပ်ကမ်းမြို့ ဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင်မူ ဘီနိုရေမြစ်ကို အသုံးပြု၍ ဂါအူယာမှ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသို့ အချို့သော ရာသီများတွင် သွားလာနိုင်သည်။
ကင်မရွန်းနိုင်ငံတွင် ဘာသာတရား ကိုးကွယ်မှု အမြောက်အမြား ရှိပြီး ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်လည်း မြင့်မားသည်။ အများပြားဆုံး သက်ဝင်ယုံကြည်မှုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်ပြီး လူဦးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ မျှ ကိုးကွယ်ကြသည်။ အစ္စလာမ် ဘာသာမှာ လူနည်းစု ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတရား ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ၏ ၅ ပုံ ၁ပုံမျှသာ ရှိသည်။ ထို့ပြင် ရိုးရာ ဘာသာတရားများကိုလည်း ကျင့်သုံးသူ အမြောက်အမြား ရှိသည်။ မွတ်စလင်များမှာ မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် များပြားကြပြီး ခရစ်ယာန်များမှာ အဓိက အားဖြင့် တောင်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းဒေသများတွင် အများဆုံး ရှိသည်။ သို့သော် ဘာသာတရား ၂မျိုးစလုံးအား ကိုးကွယ်သူ အများအပြားကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တွေ့ရသည်။ မြို့ကြီးများတွင် ဘာသာတရား နှစ်မျိုးစလုံးမှ ကိုးကွယ်သူ သိသာစွာ များပြားသည်။ ကင်မရွန်းနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်များကို ဆွန်နီ၊ ရှီယာ့၊ အာမာဒစ်စ်၊ ဆူဖီ၊ မူဝါဟစ် မွတ်စလင် နှင့် သီးခြားအစုဖွဲ့ မဖော်ပြထားသော မွတ်စလင် ဟူ၍ အုပ်စုကွဲနေကြသည်။ 
ရေ၊ အုန်းသီးဝိုင်၊ ကောက်နှံ ဘီယာတို့မှာ အစားအသောက်နှင့် တွဲဖက် သောက်သုံးသော ရိုးရာ အဖျော်ယမကာ များ ဖြစ်ကြပြီး ဘီယာ၊ ဆိုဒါ နှင့် ဝိုင်တို့မှာ လူကြိုက်များလာကြသည်။ ငွေထည်အသုံးအဆောင်များကို အသုံးများပြီး အစားအသောက်ကို ညာလက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်လေ့ ရှိကြသည်။ နံနက်စာတွင် ကျန်ရှိနေသော ပေါင်မုန့်နှင့် သစ်သီးများကို ကော်ဖီ သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်ဖြင့် တွဲဖက် သောက်သုံးကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နံနက်စာကို ဂျုံမှုန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပါ့ဖ်ပါ့ဖန် (ဒိုးနပ်)၊ ငှက်ပျောသီးမှ ပြုလုပ်ထားသော အက်ခရာ ငှက်ပျော၊ ပဲကိတ် နှင့် အခြား စားဖွယ်ရာ အမြောက်အမြား ရှိသည်။ မုန့်ပဲ သွားရည်စာများမှာ အထူးသဖြင့် မြို့ကြီးများတွင် စားသုံးကြပြီး လမ်းဘေးဈေးသည်များထံမှ ဝယ်ယူစားသုံးလေ့ ရှိကြသည်။
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ Cameroon။ World Factbook။ CIA။ 15 May 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 September 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rapport de présentation des résultats définitifs (in fr)။ Institut national de la statistique။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ World Economic Outlook Database, April 2021။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ ၉.၀ ၉.၁ Bamum။ National Museum of African Art, Smithsonian Institution။ 29 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Matthews, Andy (12 March 2008). "Cameroon protests in USA Archived6December 2008 at the Wayback Machine.", Africa News. Accessed 13 March 2008.
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ Neba 250.
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Cameroon: Government။ Michigan State University: Broad College of Business။ 12 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ ၂၂.၂ ၂၂.၃ ၂၂.၄ "U.S. Relations With Cameroon". United States Department of State. Accessed6April 2007.
↑ Business Corruption in Cameroon။ Business Anti-Corruption Portal။ 24 March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ ၃၀.၂ "Cameroon (2006)"။ Country Report: 2006 Edition။ Freedom House။ 30 September 2007 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6April 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ ၃၁.၂ ၃၁.၃ ၃၁.၄ ၃၁.၅ ၃၁.၆ ၃၁.၇ "Cameroon". Country Reports on Human Rights Practices,6March 2007. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State. Accessed6April 2007.
↑ ၃၂.၀ ၃၂.၁ "2006 Elections to the Human Rights Council: Background information on candidate countries"။6June 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။. May 2006. Amnesty International Publications. Accessed6April 2007.
↑ ၃၃.၀ ၃၃.၁ West 11.
↑ ၄၁.၀ ၄၁.၁ ၄၁.၂ Mbaku 15.
↑ List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor Archived 10 June 2015 at the Wayback Machine.. Dol.gov. Retrieved on 29 June 2015.
↑ ၄၆.၀ ၄၆.၁ DeLancey and DeLancey 21.
↑ Life Expectancy ranks။ CIA World Factbook။4May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Highest Average Annual Precipitation Extremes Archived 25 May 2012 at Archive.is". Global Measured Extremes of Temperature and Precipitation, National Climatic Data Center,9August 2004. Accessed6April 2007.
↑ ၆၄.၀ ၆၄.၁ Neba 16.
↑ ICAM of Kribi Campo။ UNIDO။6May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၆.၀ ၆၆.၁ ၆၆.၂ ၆၆.၃ Neba 17.
↑ Cameroon Highlands Forests။ WWF။ 1 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Musa, Tansa (8 April 2008). "Biya plan to keep power in Cameroon clears hurdle Archived 24 September 2015 at the Wayback Machine.". Reuters. Accessed9April 2008.
↑ Cameroon livestock production map။ FAO။5June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Som, Julienne။ Women's role in Cameroon fishing communities။ FAO။3June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၀.၀ ၈၀.၁ ၈၀.၂ Cameroon။ AWF။ 12 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၇.၀ ၈၇.၁ Musa, Tansa (27 June 2007). "Gunmen kill one, kidnap 22 in Cameroon near CAR Archived 29 June 2007 at the Wayback Machine.". Reuters. Accessed 27 June 2007.
↑ ၉၃.၀ ၉၃.၁ Mbaku 20.
↑ CO2 Emissions from Fuel Combustion: Population 1971–2009 (XLS)။ IEA။ 12 October 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 September 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ PDF Archived6January 2012 at the Wayback Machine. pp. 87–89.
↑ ၁၁၉.၀ ၁၁၉.၁ ၁၁၉.၂ ၁၁၉.၃ ၁၁၉.၄ ၁၁၉.၅ ၁၁၉.၆ July–December, 2010 International Religious Freedom Report – Cameroon။ US Department of State (8 April 2011)။ 12 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂၄.၀ ၁၂၄.၁ West 18.
↑ ၁၂၆.၀ ၁၂၆.၁ Mbaku 189.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကင်မရွန်းနိုင်ငံ&oldid=730289" မှ ရယူရန်
ဖူလာဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။